Maalinta: Febraayo 18, 2017
Qorshaha cusub ee line-ka waxaa lagu sameeyey Gebze
Qaban-qaabooyin cusub ayaa laga sameeyay Khadka Gebze 397 TEPECİK-KÖSELER-DEMİRCİLER-OTOGAR-GEBZE Gebze degmada Tepecik, Köseler, Demirciler iyo Tavşanlı xaafadaha si loo hubiyo marin u helka xarunta Gebze, khadka toosan ee no. [More ...]
Dadka Sivas waxay rabaan Tram: Waqtiyo badan kahor, muwaadiniinta Sivas waxay u keeneen ajandaha rabitaanka samaynta taraam. Macnaha guud, Sivas waxay noqon doontaa magaalo ka dambaysa sharraxaadda, codsi ay soo jeediyeen Sivaslılar ajande dheeri ah [More ...]
Xakameynta shil tareen ee Sacuudi Carabiya, 18 ayaa ku dhaawacmay
Shilka tareenka ee Sacuudi Carabiya, 18 ayaa dhaawacmay: Natiijadii ka dhalatay afgembigii gaari xamuul tareenada ee Bariga Sacuudiga, rakaabka 193 iyo shaqaalaha 6 ayaa la sheegay inay ku dhaawacmeen tareenka. Sacuudi Carabiya [More ...]
Qandaraaska Mashruuca Kastamonu ee Kastamonu ee Kastamonu: Mashruucan oo ay taageerayaan Wakaaladda Horumarinta Waqooyiga Anatoliya (KUZKA) ayaa cirka ka xiri doona Kastamonu Castle iyo Clock Tower. Kastamonu suugaanta taariikhiga ah ee u gaarka ah iyo magaalada [More ...]
Manisada 5 dhaawacay isgoyska shilka
Shil heerar ah oo ka dhacay isgoyska Manisa 5 ayaa ku dhaawacmay: degmada Yunusemre ee tareenka rakaabka ee Manisa ayaa ku dhacay gaari ganacsi oo fudud iyada oo ay sababtay cunug 5 qof ah ayaa dhaawacmay. Sida xogta lagu helay, 31135 safarka Konya [More ...]
Wasiirka Arimaha Dibadda ayaa ka hadlay mashaariicda gaadiidka ee Izmir
Wasiirka Arslan ayaa ka waramay mashruucyada gaadiidka ee İzmir: Wasiirka Gaadiidka, Arimaha Badda iyo Isgaarsiinta Ahmet Arslan wuxuu sheegay in qandaraaska 'Menemen-Aliağa-Çandarlı Motorway' ay ka heleen iskaashiga kooxda IC-Astaldi-Kalyon. Wasiir Arslan, shir-jaraa'id oo uu ku qabtay hoyga martida ee Agaasimaha Wadooyinka Wadooyinka, [More ...]
Tareenadu kuma guul daraystaan ​​iyaga
Adeegyada tareenka ma faragalin doonaan mahadnaq iyaga: In kasta oo xaaladaha adag ee jiilaalka ee Bariga Anatolia, adeegyada tareenka ay sii socdaan iyadoon la carqaladeynin iyada oo ay uga mahadcelinayaan shaqaalaha Shaqaalaha Tareenka Waddanka Turkiga. Shaqaalaha tareenka ayaa shaqo bilaabay aroornimadii hore, barafna wuxuu ku fadhiyey biraha [More ...]
Mustafa Yaylali, Waxaa soo raaca ereyada
Mustafa Yaylali, Waxaan nahay daba-gal ballamihii: Duqa Magaalada Trabzon ee Magaalada Orhan Fevzi Gumrukcoglu'nun echo oo ku saabsan tareenka maalmihii dhowaa wuu socdaa. "Tareenka ayaa ka heli doontaa Turkey ee 2025 qiyaas. Maaha 2023 laakiin 2025. Hadda waxaan bilownay 2017. [More ...]
Maanta taariikhda: 18 Febraayo 1856 Ottoman Empire oo leh Dib-u-habeeynta ...
Maanta taariikhda 18 Febraayo 1856 Iyadoo Dib-u-habaynta Dib-u-Eegista, Dawlad-goboleedku wuxuu ballan-qaaday in uu iskaashi la samaynayo reer galbeedka iyo in uu xaq u leeyahay in uu hantida ku yeesho dhulka Boqortooyada Ciraaq.